easter Archives | တစ်ဦးကရထား Save
tag ကို: easter
နေအိမ် > easter
ဥရောပတိုက်တွင်အီစတာပွဲတော်တိုင်းပြည်ကနေတိုင်းပြည်နှင့်မြို့ကနေမြို့ကိုကွဲပြား. ဒါဟာခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းများ၏အထင်ရှားဆုံးနှင့်အသက်အကြီးဆုံးပွဲတော်များတစ်ဦးရဲ့. အီစတာသင်္ချိုင်းတော်မှယေရှုခရစ်၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း၏အခမ်းအနားဖြစ်ပါသည်. The celebration date for Easter…
ဗင်းနစ်အီတလီမှာအများဆုံးဖှယျနှင့်မှော်မြို့တသည်နှင့်ရထားအလွယ်တကူဖြစ်ပါသည်. အီစတာအားလပ်ရက်ကာလအတွင်းဗင်းနစ်သွားရောက်လည်ပတ်ခြင်းအားဖြင့်, သငျသညျသာယာသောနွေဦးရာသီဥတုကခံစားနိုငျ. ဒါဟာသင်အိမ်ပြင်တနေ့လုံးဖြုန်းဖို့ခွင့်ပြု. သမိုင်းဝင်စင်တာမှခရီးသွား…